အားလုံးသော ညီအစ်ကိုမောင်နှမများမင်္ဂလာပါ .. ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်တော် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ အားလုံးကို ၀မ်းသာစရာသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်ဗျာ .. ဘာလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ PTC ( Paid To Click ) ဆိုတဲ့ ကြော်ငြာကြည့်ရင်း သို့ ကြော်ငြာ Click လုပ်ရင်း အင်တာနက်မှာငွေရှာတဲ့အကြောင်းကို တော်တော်များများသိကြမယ်ထင်ပါတယ်.. ရလာတဲ့ငွေတွေက လည်း ဒေါ်လာနဲ့ဖြစ်ပြီး ငွေထုတ်ဖို့အတွက် PayPal Account ရှိမှရပါတယ်.. အဲသည် Account ကလည်း မြန်မာမှာ အဆင်မပြေတဲ့အတွက် ငွေထုတ်ဖို့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ် .. ကဲ အခု ကျွန်တော်မေးမယ် တစ်လကို မြန်မာငွေ သုံးလေးသိန်းရမယ် .. ရတဲ့ငွေကလည်း မိမိရဲ့ KBZ Bank (or ) CB Bank Account ထဲကို ၀င်လာမယ် .. ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ် ( ဂျပန် ) ကိုလည်း Free သွားရမယ်ဆိုရင် မကောင်းဘူးလားဗျာ ???? :D "' ဟ .. မင်းဟာ ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားကွာ " မေးစရာဖြစ်လာမယ် .. သိပ်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ.. ကဲ ဘယ်လိုလဲရှင်းပြမယ်နော် .. အခု ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက် ကြော်ငြာ Company ကြီးတစ်ခုက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရုံးလာဖွင့်ထားပါပြီ .. Asia Dream Myanmar ဟူသော မှတ်ပုံတင်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင် ၃ ခုပြုလုပ်ထားတဲ့ Company လည်းဖြစ်ပါတယ်.. Company နာမည်ကိုတော့ onocoro affiliate cafe' အမည်ဖြင့် ရန်ကင်း Centre အနီး ၊ ရန်ကင်းပန်းခြံလမ်း ၊2(ှQT ) တွင်ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါပြီ။ ကဲ ကောင်းပြီ ဒီ Company က ဘာတွေလုပ်ပေးမလဲဆိုရင် သူတို့ရဲ့ Product တွေကို Internet ပေါ်မှာ Paid To Click ပုံစံဖြင့် ကြော်ငြာပါမယ်.. Paid To Click ဆိုတာကတော့ သူတို့ပေးတဲ့ကြော်ငြာကို ကြည့် .. သူတို့က ကြည့်တဲ့သူကို ပိုက်ဆံပြန်ပေးမယ် .. အဲဒါကို Paid To Click လို့ခေါ်ပါတယ်.. ကြော်ငြာတွေကို ဖုန်း ၊ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် .. ကဲ ဟုတ်ပြီ ဘယ်လို ကြည့်ရှုရမလဲ ဆိုတာ အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါတော့မယ်။
Posted by ကလေးလေး at 12:24 AM0comments
ဘဏ်မှာငွေစုသလို အင်တာနက်မှာ Bitcoin စုပါ (အပိုင်း ၂ ) EBook PDF
ဘဏ်မှာငွေစုသလို အင်တာနက်မှာ Bitcoin စုပါ (အပိုင်း ၂ ) EBook ထွက်ပါပြီ .. ယခုဒုတိယစာအုပ်မှာ ယခင် အပိုင်း ၁ စာအုပ်ထပ် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အကြောင်း အရာများထည့်သွင်းထားပြီး အချိန်တိုတိုအတွင်း Bitcoin တွေကို ဘယ်လိုများများရအောင်ရှာရမယ် ... ရလာတဲ့ Bitcoin တွေကို Online Money Exchanger တွေကို အဆင့်ဆင့်ဖြတ်သန်းပြီး ဘယ်လို မြန်မာငွေထုတ်ယူရမယ် အစအတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးရေးသားထားပါတယ် .. ကန့်သတ်ချက်များအဖြစ် Phone အသုံးပြုပြီးပြုလုပ်မည့်သူများအား တားမြစ်ထားပါတယ် .. တောင်းဆိုနေတဲ့ ညီအစ်ကို တော်တွေ ညီမတော်တွေအတွက် ထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ လိုအပ်ချက်များရှိနေပါကလည်း ကျွန်တော့်အပစ်သာဖြစ်သည့်အတွက် ထောက်ပြပေးပါ ပြန်လည်ဖြည့်စွက်ချက်များ ဖြင့် နောက်ထွက်မယ့် အပိုင်း ၃ စာအုပ်မှာ ဖော်ပြသွားပါ့မယ် .. ကဲ ....
Download ~~~> http://www.solidfiles.com/d/f250a16826/BTC2.pdf
( စာအုပ်အားဒေါင်းလျှင် ကွန်ပျူတာဖြင့်သာဒေါင်းပါ ..ပီးမှဖုန်းထဲ ထည့်ဖတ်ချင်ဖတ်ပါ .. PDF ဖြင့်ချုပ်ပေးထားပါတယ် ဖုန်းနှင့်ဒေါင်းလို့ မရလျှင်မသိပါ )
Posted by ကလေးလေး at 12:02 AM0comments
ဘဏ်မှာငွေစုသလို အင်တာနက်မှာ Bitcoin စုပါ (အပိုင်း 1) EBook PDF
ဘဏ်မှာငွေစုသလို နောင်ရေးအတွက် အင်တာနက်မှာ Bitcoin စုပါ ( အပိုင်း ၁ ) PDF
ကဲ .. Bit Coin အကြောင်း အပိုင်း ၁ တင်ပေးလိုက်ပါပြီနော်..ဘာကြီးလဲဆိုတာကိုတော့ ခေါင်းစဉ်မှာမြင်တဲ့အတိုင်းပါဘဲ .. ဇွဲရှိဖို့ .. စိတ်ရှည်ဖို့ .. သီးခံဖို့ပဲလိုတာပါ .. ကဲ.. စာအုပ်လေးဒေါင်းလိုက်ပါ..လိုအပ်တာတွေ့ရင်လည်း အမှားပြင်ဆင်နိုင်အောင် ထောက်ပြပေးပါ .. အရှင်းလင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရေးပြထားပါတယ်.. ဖုန်း ၊ ကွန်ပျူတာ အားလုံးလုပ်လို့ရပါတယ်..သေသေချာချာဖတ်ပါ..တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကို အသုံးချပါလို့ ကျနော်တိုက်တွန်းပါရစေ။ Down နိုင်ပါပြီနော်။
Posted by ကလေးလေး at 11:58 PM0comments
PAIDVERTS အားအကျိုးရှိစွာအသုံးပြုပြီး Online ၀င်ငွေရှာဖွေခြင်း
ကဲ … အင်တာနက် ၀င်ငွေရှာဆိုဒ်တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဗျား..ပီးတော့ သည်ငွေတွေကို ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲ ဆိုတာရေးပြသွားပါ့မယ်။ လူတော်တော်များများက အင်တာနက်မှာ ကြော်ငြာ Click ရင်းဝင်ငွေရှာတဲ့အလုပ်ဆိုရင် လန့်နေကြမယ်ထင်ပါတယ်.. ဘားမှအကျိုးမရှိဘဲ ဖုန်းဘေလ်တွေ ကုန်သွားလို့လေ J တစ်ကယ်တော့ သည်လိုအလုပ် တွေဆိုတာ သေချာလုပ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် တစ်ကယ့်ကို Home Base Job တစ်ခုပါဘဲ .. ဘာအလုပ်မှမလုပ်ပဲ သည်လို အင်တာနက်ကနေ ငွေရှာပြီး ထိုင်စားနေတဲ့သူတွေ ဒုနဲ့ဒေးရှိတယ် .. သူတို့က တစ်ကယ်ကို အထာပေါက်ပြီး
လုပ်တတ်ကိုင်တတ် စဉ်းစားတွေးခေါ်မြင့်တဲ့သူတွေပါဘဲ..သူတို့က သူတို့သိတဲ့ငွေရှာနည်းတွေကို စာအုပ်လဲမထုတ်ဘူး၊ သူများကိုလည်းမဝေမျှပေးဘူး..သူတို့ပြောတာရှင်းတယ် " မစဉ်းစားမတွေးခေါ် ဘဲ အလွယ်တစ်ကူလက်လျော့တတ်တဲ့သူ တွေအတွက် အချိန်မပေးနိုင်လို့ပါ " တဲ့..စကားက ရိုက်ပေါက်ကြီးပါ .. တစ်ကယ်တော့လည်းဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော် အင်တာနက်မှာငွေရှာနည်းအကြောင်းအရာတွေ အများကြီးရေးခဲ့တယ် မသိရင်မေးမြန်းဖို့ adflycreator@gmail.com ဆို တဲ့ Email ပေးခဲ့ပါတယ်။ မေးမြန်းချက်တွေကိုလည်း ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်..အဲလိုဖြေကြားရင်းနဲ့ ဘာကိုသုံးသပ်မိသွားသလဲ
ဆိုရင် တော်တော်များများက ကိုယ့်ညှစ်အားကိုယ်မသုံးချင်တာကိုတွေ့လာရတယ်ဗျာ .. တစ်ကယ်တော့ ငွေရှာနည်းကို ရေးပြခဲ့တယ်ဆိုတာ သေသေချာချာ ပုံတွေစာတွေနဲ့ရှင်းပြခဲ့တာပါ..အဲသည်လိုရှင်းပြနိုင်ဖို့ကိုလည်း Google Search , Youtube တို့မှ သေချာလေ့လာခဲ့ရပါတယ်.. သူတို့ရှင်းပြထားတယ်ဆိုတာ ပုံလေး နှစ်ပုံလောက်နဲ့ ကျန်တာက စာတွေ ချည်းပါဘဲ .. အဲဒါတွေကို သေချာလေ့လာပြီး ပုံတွေ စာတွေဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးတွေကို ချပြခဲ့တယ်..ချပြခဲ့ပေ မယ့်လည်းရလဒ်တွေ မကောင်းခဲ့ပါဘူး .. ကိုယ့်အားကိုမကိုးချင်တဲ့သူတွေ များနေခဲ့လို့ပါဘဲ..အောင်မြင်သွားတဲ့သူ ..လုပ် တတ်သွားတဲ့သူတွေကို တွေ့ရင်လည်းပျော်ရပါတယ်..တစ်ချို့ဆိုရင် ကိုယ့်ထက်တောင် လုပ်တတ်သွားသေး၊ ရှာတတ်သွား သေးတယ်..အဲလိုမျိုးတွေဆိုရင် တစ်ကယ် အတိုင်းမသိဝမ်းသာရတာပါ.. ကဲ ကောင်းပြီ အင်တာနက်မှာ ၀င်ငွေရှာတဲ့ဆိုဒ်ပေါင်းများစွာရှိတယ်..အတုတွေလည်းရှိတယ် တစ်ချို့က အတုတွေမှန်းမသိကြဘူး ငွေပေးတယ်ဆိုရင် လုပ်ကြတော့တာဘဲ ဒီလိုလုပ်ကြတဲ့အတွက် အချိန်ကုန်ငွေကုန်တွေ ဖြစ်ကုန်တော့တာပါဘဲ .. ငွေမှတစ်ကယ်မရတာလေ
ဒါကြောင့် ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ဆိုဒ်တစ်ခုဟာ အတုလားအစစ်လားသိချင်ရင် ဥပမာ 2Dollarclick.com ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်ဟာ အတုလား အစစ်လားသိချင်ရင် 2dollarclick is scam ? ဆိုပြီးအင်တာနက်မှာရိုက်ရှာလိုက်ပါ..ဒါဆိုရင် အဲသည်ဆိုဒ်ကို ဝေဖန်ထားတဲ့ Complain တွေများစွာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်..သူတို့ဘာတွေပြောနေသလဲ Link တွေကိုလိုက်ကြည့်ပါ သူတို့တွေ ဝေဖန်ချက်တွေ ကိုကြည့်ပြီး သည်ဆိုဒ်ဟာ အတုလား အစစ်လား ဆိုတာခွဲခြားတတ်သွားပါလိမ့်မယ်.. ကဲအခု Padidverts ဆိုတဲ့ဆိုဒ်အကြောင်းကို ကျနော်ရေးမှာပါ ဒီတော့မိတ်ဆွေတို့အနေဖြင့်လည်း Paidverts is scam ? ဆိုပြီး Google မှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါ.. Forum , Blog တွေမှာ User တွေက ဘာတွေပြောနေကြသလဲ..ဘာတွေကွန်ပလိန်းတက်နေကြသလဲ လိုက်ဖတ်ကြည့်ပါ..ဒါဆိုရင် Paidverts ဟာ အလုပ်လုပ်သင့်တဲ့ဆိုဒ်ဟုတလား မဟုတ်လား သဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့လည်း အဲလိုပါဘဲ ဆိုဒ်တစ်ခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် သူ့အကြောင်းကိုဝေဖန်ထားတဲ့ ဖိုရမ်တွေ ကိုလိုက်
ကြည့်ပါတယ် .. လူအများဝေဖန်ထားတဲ့ ကွန်မန့်တွေကိုကြည့်ပီးလုပ်သင့်သလား မလုပ်သင့်သလား ဆုံးဖြတ်ပါတယ် လုပ်သင့်တယ်ဆိုမှ လုပ်ပါတယ် .. သည်လိုလေးရှာဖွေပြီး နည်းနည်းတီးခေါက်ကြည့်မှ ငွေရှာဆိုဒ်တွေဟာ လုပ်သင့်မလုပ် သင့်ဆုံးဖြတ်တတ်မှာဖြစ်ပါတယ်..အိုကေ ကောင်းပြီ နောက်ထပ် အကြီးမားဆုံးပြသနာတစ်ခုရှိသေးတယ်.. ဘာလဲဆို တော့ " ငွေရှာတာက ဟုတ်ပါပြီ ဘယ်လိုထုတ်ရမှန်းမသိပါဘူး .. ဒါကြောင့်စိတ်ပျက်လို့မလုပ်တော့ဘူး " ဆိုတာတွေ ပါ ဘဲ .. ငွေရှာနည်းအကြောင်းကို ရေးသားတိုင်းမှာ PayPal Account နဲ့ငွေထုတ်ရပါတယ်လို့ ကျွန်တော် ခဏခဏရေးပါ တယ် .. မသိရင်မေးဖို့ Email လိပ်စာလိပ်စာပါချန်ပေးပါတယ်..ယုတ်စွအဆုံး လိုအပ်ရင်အရေးပေါ်အကူအညီတောင်း ဖို့ ဖုန်းနံပတ်ပါ ဖော်ပြပေးထားပါတယ် .. ဒီလောက်ကူညီချင်လို့ပေးထားတာတောင် " ငွေမရှာတတ်ဘူး ၊ ငွေမထုတ်တတ်ဘူး ၊ အလကားပါ ငွေလဲတစ်ကယ်မရဘူး ဖုန်းဘေကုန်တာဘဲအဖတ်တင်တယ် " အဲလို အဲလိုသူမျိုးတွေ အတွက်တော့ ကျွန်တော်လဲ ဆက်မပြောတတ်တော့ပါဘူး .. သူထိုက်နဲ့သူခံလို့ဘဲ သတ်မှတ်ရတော့မှာပါဘဲ။ တစ်ကယ် တော့နော် အင်တာနက်ဝင်ငွေရှာလုပ်ငန်းဆိုတာ အပျင်းပြေလုပ်လို့လဲရသလို ၊ တစ်ကယ့် အလုပ်တစ်ခုဖြစ်လဲ အချိန်ပေး လုပ်လို့ရတယ် .. တစ်ကယ်လုပ်တတ်ရင် တစ်နေ့ကို 15$ အသာလေးရနေတာပါ.. မနည်းဘူးနော် ..တစ်ကယ်ကို မနည်း ပါဘူး ဒါပေမယ့်ဗျာ စစ်မရောက်ခင်မြှားကုန်တတ်တဲ့သူမျိုးတွေ ၊ အကူအညီပေးပါ့မယ်ဆိုတာတောင် မတောင်းဘဲ ဘေးထိုင်ဘုပြောသူတွေ အဲလိုသူမျိုးတွေကြောင့်တစ်ခါတစ်လေတော့ စိတ်တော်တော်လေးကုန်မိပါတယ်..ကိုယ်ကဖြစ်စေ ချင်တယ်..လိုက်လာနိုင်တဲ့သူက အယောက်တစ်ရာမှာ 20 လောက်ပဲရှိပါတယ်.. မစဉ်းစားကြဘူး..မတွေးခေါ်ကြဘူးဗျာ.. ကဲပါ .. ညဉ်းချင်းတွေချရင် စကားများတယ်ဆိုပြီး အမြင်ကတ်ပါဦးမယ်..ကိုယ့်လူမျိုးတွေကို ဖြစ်စေချင် ..ရစေချင်. .တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ဈေးဖိုးသက်သာစေချင်တဲ့ စိတ်ကိုအခြေခံလို့ သည်လိုပြောပြနေတာပါ… အခုလဲ အသစ်အဆန်း တွေ့ရင် ဝေမျှချင်တဲ့စိတ်က မနေတတ်လေတော့ ထပ်မံဝေမျှပေးလိုက်ပါဦးမယ်… ကျွန်တော် ငွေရှာနည်းမရေးခင်မှာ တစ်ခုတော့ သတိပေးလိုက်ပါ့မယ် ဘာလဲဆိုတော့ ငွေရှာတဲ့ဆိုဒ်တွေကို 80% သာယုံပါ..ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ပြော ပြော 80% ပဲ ယုံကြည်ကြပါ..ဘာလို့လဲဆိုတော့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေလုပ်ရတဲ့အလုပ်မလို့ပါ.. ဒါကြောင့်သည်လို အလုပ်
တွေက မိမိရဲ့ဖုန်းဖိုး၊ နဲ့ဈေးဖိုးကတော့ ကောင်းကောင်းကာမိပါလိမ့်မယ်..တစ်ကယ်ငွေရှာတတ်သူအဖို့ကတော့ တစ်နေ့ တစ်သောင်းခွဲ ဆိုတာပြေးမလွတ်ပါဘူး.. အိုကေ..ဒီနေရာမယ် တစ်ခုဖြတ်ပြီးကြော်ငြာပါဦးမယ် .. အသက်အရွယ်မရွေး ၊ ပညာအရည်အချင်းမလို အပ်ဘဲ..အချိန်တိုအတွင်းအောင်မြင်စေနိုင်မည့် Business စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရှိပါတယ်၊ မည်သည့်အရင်းအနှီးမှထည့်စရာမလိုဘဲ ဇွဲရှိသူတိုင်းအောင်မြင်နိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုပါ အသက် 18 ၊ 19 နှစ်လေးတွေက အစ ရာထူးပေါင်းစုံနဲ့အောင်မြင်ပြီး ၀င်ငွေများရရှိနေတဲ့နေရာပါ။ ဒီမှာ ၀င်ကြည့်ပြီး Like လုပ်ခါ လေ့လာနိုင်ကြပါတယ်။
Posted by ကလေးလေး at 11:59 AM0comments
(ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် တပ်မတော်ဖွဲ့ဖို့ ဂျပန်ပြည်မှာကွယ်၊ တကယ်ပဲ အသက်နဲ့လဲလို့ ဆင်းရဲဒုက္ခခံကာ ကြံစည်တယ်၊ သူရဲကောင်းတဲ့ ဗိုလ်အောင်ဆန်းနဲ့ အာဇာနည်တွေရယ်) ၂
ငါတို့ ဗမာပြည်မယ်၊ မိဘတိုင်းကကွယ် ဗိုလ်အောင်ဆန်းလို သူရဲကောင်းတွေမွေးရမယ်။ ငါတို့ ဗမာပြည်မယ်၊ မိဘတိုင်းကရယ် အာဇာနည်အစစ်တွေကိုရှိဖို့ မွေးရမယ်။
သြော်…ဘုရင့်နောင်နဲ့ ရာဇာဓိရာဇ်တို့လို မင်းရဲကျော်စွာ ပမာပုံနှယ်၊ အလောင်းဘုရားတို့လိုကွယ်၊ ဗမာတိုင်း ဗမာမျိုး အားကိုးလောက်ပေရဲ့ မကြောက်တမ်း၊ မရွံ့တမ်း ဗမာတွေ အောင်ပန်းဆွတ်ကြရှာလေတယ်။
Posted by ကလေးလေး at 10:58 AM0comments
ဆရာမ - ကဲ.. မောင်ထုံ.. ၉ အလီကို အလီဇယားမကြည့်ဘဲ ရွတ်ပြစမ်း။
မောင်ထုံ - ၉ တစ်လီ ၉ ။ ၉ နှစ်လီ ၁၈.. (သူ၏ စာအုပ်နောက်ကျောရှိ ဇယားကိုကြည့်လျက်)
ဆရာမ - နင့်ကို အလီဇယားမကြည့်ဘဲ ရွတ်လို့ပြောတာလေ။
မောင်ထုံ - ကျနော်ကြည့်တာ အလီရဲ့ ဇယားမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့စာအုပ်ကိုပိတ်ထားပါတယ်။ ကျနော်ကြည့်တာ ကျနော့်ဇယားပါ..
၂ ) facebook ID
Posted by ကလေးလေး at 10:52 AM0comments
အပိုင်း(၁) ၊ အနှိုင်း
တကယ်တော့ သူက ထူးခြားသူမဟုတ်ပါဘူး
ခင်ဗျားတို. ကျွန်တော်တို.လိုပဲ မထင်မရှားမွေးဖွားလာတာပါ
မွေးချိန်မှာ ကြယ်တွေကြွေတဲ့သူလည်း မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
ခင်ဗျားတို. ကျွန်တော်တို.လိုတော့ မနေခဲ့ဘူး။
ခင်ဗျားတို. ကျွန်တော်တို.လို မတရားမှုကို ငုံ.ခံမနေခဲ့ဘူး
ခင်ဗျားတို. ကျွန်တော်တို.လို ကိုယ့်ကိုထိခိုက်မှာ စိုးရိမ်မနေခဲ့ဘူး
ခင်ဗျားတို. ကျွန်တော်တို.လို တို.လုပ်လည်းမထူးပါဘူးကွာမပြောခဲ့ဘူး
ခင်ဗျားတို. ကျွန်တော်တို.လို အကြောက်တရားတွေနဲ. ကုပ်မနေခဲ့ဘူး။
အပေးချည်းပဲ ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်က ထူးဆန်းနေခဲ့တယ်။
ပြည်သူတွေအတွက် လုပ်တဲ့သူက ထင်ရှားနေခဲ့တယ်။
Posted by ကလေးလေး at 10:50 AM0comments
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး လွတ်လပ်ရေး၏ ဖခင်ဗိုလ်ချုပ် အမှတ်တရ
အောက်ပါ မိန့်ခွန်းမှာ ဂျပန်ခေတ် ၁၉၄၄ -ခု မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက်အချိန်တွင် မင်္ဂလာဒုံ ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းဆင်းပွဲ ဠ် ဗမာ့တပ်မတော် စစ်သေတာပတိ နှင့် စစ်ဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောကြားသော မိန့်ခွန်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ။သူကျဆုံးသွားခဲ့ရသော ဤဇူလိုင်လတွင် သူ့အားပြန်ပြောင်း သတိရမိသည့်အားလျှော်စွာ သူ၏ ပြောင်မြောက်သော မိန့်ခွန်းကို ရှာဖွေ ဖော်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း။။
( ဗိုလ်ဥတ္တမကျော် )
Posted by ကလေးလေး at 10:46 AM0comments
" ဗိုလ်ချုပ်ဦးအောင်ဆန်း "
Posted by ကလေးလေး at 10:41 AM0comments
မွေးနေ့ရက်လေးများက ပြောသော အမူအကျင့်များ
Posted by ကလေးလေး at 10:35 AM0comments
ကြော်ငြာ ကလစ် ရုံနဲ့ တစ်လကို3/4 သိန်းရမယ့် အခွင်...
ဘဏ်မှာငွေစုသလို အင်တာနက်မှာ Bitcoin စုပါ (အပိုင်း ...
ပုံတောင် ပုံညာဒေသမှ နှစ်သန်းပေါင်း ၄၀ ရှိ ပရိုင်းမိတ်ရုပ်ကြွင်းများ တွေ့ရှိချက်အရ လူသားမျိုးနွယ်အစ မြန်မာကဆိုပြီးတော့ ပညာရှင်တွေက သက်သေပြခ...
ကမ္ဘာ့ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု အောက်စဖို့ဒ် ဆရာတော်
"ကမ္ဘာ့ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု အောက်စဖို့ဒ် ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဓမ္မသာမိ အား အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘွဲ့တံဆိပ် ပူဇော် ချီးမြှင့်"
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ဗျာဒိတ်တော်ခံယူသည်မှအစ တရားအလုံးစုံကို အကုန်အစင် သိတော်မူသော အတုမရှိ သဗ္ဗညုဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိတော်မူပှုံ များကို သရုပ်ေ...
မထင်ပါနဲ့ ပထမလူ = မနေ့ညက မင်းတို့လင်မယား ရန်အကြီးအကျယ် ဖြစ်ကြတယ်ဆို။ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုပြီးသွားတာလဲ .. .. ။ ဒုတိယလူ = ဘယ်ရမလဲ ဒီမိန်းမ ...
အားလုံးသော ညီအစ်ကိုမောင်နှမများမင်္ဂလာပါ .. ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်တော် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ အားလုံးကို ၀မ်းသာစရာသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်ဗ...
၁) အလီဇယား ဆရာမ - ကဲ.. မောင်ထုံ.. ၉ အလီကို အလီဇယားမကြည့်ဘဲ ရွတ်ပြစမ်း။ မောင်ထုံ - ၉ တစ်လီ ၉ ။ ၉ နှ...
ကြော်ငြာ ကလစ် ရုံဖြင့်Paidverts မှ ငွေရနည်း
Big Bag - IDGAF
Vista Icon Pack2
အိပ်မက်ရွာ - All Forums
ကွန်ပျူတာ လေ့လာသူများ Welcome ပါ။ - 21 January 2009 - Personal site
မှာချင်တာလေးတွေ ......မှာ ခဲ့ပါ
မန္တလေး, Myanmar (Burma)
ကလေးလေး. Picture Window theme. Theme images by -ASI-. Powered by Blogger.